Ujeedka safarka Xasan Cali Kheyre ee Addis Ababa, oo la ogaadey - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Uncategorized Ujeedka safarka Xasan Cali Kheyre ee Addis Ababa, oo la ogaadey
Ujeedka safarka Xasan Cali Kheyre ee Addis Ababa, oo la ogaadey
Muqdisho (Walwaal Online) – Xoggo la xidhiidha safarka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ku aadey Addis-Ababa caasimada Itoobiya. Ayaa Ilo-xog ogaal u dhow waxa ay sheegayaan in dib u dhaca ku yimid Xisbigii Nabad & Nolol laga filayey in ay samaystaan, daraadii uu madaxweyne Farmaajo, ka codsaday raysal wasaaraha Itoobiya Dr. Abey Ahmed, oo ay aad isugu dhow yihiin, labadooduna ay doonayaan in ay markale kusoo laabtaan doorashooyinka la filo in ay ka qabsoomaan sanadkan iyo sanadka xigga labada waddan.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu dareemay warwareega, Xasan Cali Kayre iyo taageerayaashiisa oo ku badan baarlamaanka sii baxayaa, ay ka warwareegayaan in ay wax ka dhistaan xisbiga, la doonayo in loo sameeyo nabad & nolol, xisbigaa oo Madaxweyne Farmaajo doonayo in uu mar labaad isu sharaxo jagada madaxweyne oo uu hadaba ku fadhiyo.
Hase’yeeshee Xasan Cali Khayre, wuxuu doonayaa in uu isagu ku tartamo magaca xisbiga Nabad & Nolol, maadaama uu leeyahay gacan ku haynta inta badan xildhibaanada hadda baarlamaanka fadhiya oo badidoodu yihiin wasiiradiisa, ayna saamileeyda siyaasada soomaaliya iyo maamulgoboleedka puntland ay hoosta uga baaqayaan Xasan Cali iyagoo dantoodu tahay, sidii ay isaga horkeeni lahaayeen Farmaajo & Xasan, oo ay markaa u fududaato sidii midba goonidiis looga takhalusi lahaa.
Dareenkaa isasoo taray iyo iscadayn la’aanta Xasan Cali Khayre, oo dhan ka milicsanaya xooggaga ka ag-dhow ee ku qalqaalinaya inuu nasiibkiisa tijaabiyo, dhana ka cabsi qaba talooyinka beeshiisu ugu sheegayso in aanu fursadan oo aan hore u soo marin qabiilkiisa aanu dayicin, runa moodin dhalanteedka beelwayntiisa sare ku doonayso inay meesha uga qaataan.
Haddaba Madaxweyne Farmaajo kala saari kari waayey damaca & danta Xasan ayaa ka codsaday Dr. Abey in uu cadaadis saaro Xasan Cali, una sheego in aanu ka bixin garabka Farmaajo si ay u fududaato dib usoo laabashada Farmaajo doorashada soosocota.
Previous articleHooyada Federaalka, “anaa dalka ugu caqli badan, dastuurkana ugu badiya”
Next articleDareenka bulshadu ka bixisay, war-murtiyeedkii Garoowe